5990 responded out of 24497 polled
သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ စားသောက်နေထိုင်ပါတယ်လို့ ထင်ပါသလား?
ဘယ်သူတွေနဲ့ အများဆုံး စားဖြစ်လေ့ရှိလဲ?
တစ်ခုခုစားဖို့စဉ်းစားထားရင် သူငယ်ချင်းအတွက် အစားအစာရဲ့ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲ?
အစားအစာတစ်ခု ရွေးချယ်စားသောက်လို့ရှိရင် ဒီအစားအစာက ဝိတ်တက်စေနိုင်လား ၊ ဝိတ်ကျစေနိုင်လား ဆိုတဲ့အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားဖြစ်လား?
သူငယ်ချင်းတို့ နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့ အထဲမှာ ဒီလို ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေပါဝင်နေပါသလား?
ပါဝင်နေလို့ရှိရင် ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေက သူငယ်ချင်းကို ဒီအစားအစာတွေကို စားမြဲစားအောင်လုပ်နေပါသလဲ?
5761 responded out of 5990 polled
အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ အတူတူစားဖြစ်
အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ
290 responded out of 343 polled
5521 responded out of 5708 polled
5454 responded out of 5521 polled
5236 responded out of 5454 polled
3640 responded out of 5236 polled